Natiijooyinka 28 ee loogu talagalay Maqaalada Dabiiciga ah - Gofumed
Natiijooyinka 28 ee loogu talagalay qurxinta dabiiciga ah
Luulyo, 2009 Internet iyo Blogs
Shirkadaha 28 ayaa mar hore lagu dhawaaqay wajiga ugu dambeeya ee tartanka loogu talagalay quruxda dabiiciga ah ee 7, inta lagu guda jiray dhowr jeer waxaanu raacnay mawduucan. Dib-u-eegis Waxaan fahamsanahay in aaney yareyn in mawduucan uu i soo dhaweynayo, waxaan abuuri lahaa qayb sababtoo ah tani waa horey aan u ahaa 12 mawduuca:
Bishaan Janaayo ee 2008 waxaan bilaabay 7-da aan jecelahay wadamada Isbaanishka ku hadla, kuwan oo kaliya Salto del Angel Angel ayaa badbaaday. (1 laga bilaabo 7)
Sidee loo codeynayaa 7 dabeecadaha dabiiciga ah, January 2008
Bishii mar kadib waxaan sameeyey soo jeedin ayadoo la tixraacayo tirakoobyada kobcinta, ka badbaado: El Salto del Angel, Grand Canyon, Galápagos iyo Iguazu. (4 laga bilaabo 7)
7 dabeecadaha dabiiciga ah, oo sii waday korodhka
Taariikhdaas waxa uu ka hadlayay qaybinta munaasabadda mucaaradka ah haddii fursado loo siiyo qaaradda
Koonfurta Ameerika: 1
Waqooyiga Ameerika: 1
Dadweynaha: faa'iido darro ee 7 yaabab caadi ah
Doorashadan waxa aan ka hadlay fursadaha ka hor intaan dadweynaha la joogin qaaradda internetka.
Aasiya waxay yeelan doontaa 4, Europe 3, Waqooyiga Ameerika (oo aan ku jirin Mexico) waxay yeelan doonaan 2 iyo Latin America 1.
7 waxa ay la yaaban tahay, wax walbo oo dhan waxay ku noqdaan caadi
Halkan 21 ayaa soo jeediyay in la soo gebogebeeyo macalimiin, iyada oo musharraxiinta 3 ee qaaradda kasta. Kuwa aan ku dhuftay 7.
Ugu dambeyntii, maxay yihiin dabeecadaha dabiiciga ah ee ay raacayaan?
77 Dabiicada Dabiiciga ah ayaa horeba loo magacaabay
7 Wonder, dagaalkii 77
Xilligan, 11 / 11 / 11 guuleystayaasha ayaa la daabacay
Just si ay u cusboonaysiin, sida habka xulashada u shaqeeyaan, hadda hadda waxaan ku jirnaa marxaladda ugu dambeeya.
Hannaankani wuxuu ka bilaabmay 2007, oo leh saamiyada 440 ee wadamada 220. Kadibna musharaxiinta 77 ee haysta codadka intooda badan iyo sidoo kale waxay heleen dukumentiyada lagama maarmaanka ah ee dalalkooda loo doortay. Marxaladdan waxaan nahay, dhowr maalmood ka hor ayaa lagu dhawaaqay in xulalka 28 ee la soo xulay, kuwaas oo 7 la sii deyn doono.
Musharaxa Dalka Qaar ka mid ah
10. Lake Masurian
12. Shilalka Mudug
Italia Yurub (6)
14. Dhalinyaradaan Tinah Shoals
15. Baddaha dhintay
19. Maldive Islands
22 Yushan Emirates
Israel, Falastiin, Jordan
Hindiya / Bangladesh
Taipei Shiineys Asia (9)
23. The Great Barrier Reef
25 Codadka Milford
26 Uluru Papua New Guinea iyo Australia
28 Buurta miiska Tansaaniya
Koonfur Afrika Afrika (2)
Nasiib darro, laakiin ma jiraan kootooyin ku filan, si tartiib ah
Waxaan sugeynaa xarumaha 2 ee Maraykanka. Hadda wixii guulo weyn ee noociisa ah ee aan rumaysannay in aan halkan imanay, ayaa sidoo kale naga siiyay qaar ka mid ah kuwa laga tagay; Tani waa saadaasheyda:
Kilimanjaro (haddii uu helay codad ku filan)
Guddiga cusub ee codbixinta hadda waa la hagaajiyay, waa inaad xulataa musharixiinta adiga oo riixaya badhanka cagaaran.
----Halkan ayaad codkaaga ka dhiiban kartaa-----
Post Previous«Previous Quantum GIS, aragti ugu horeysay
Post Next Waa imisa qiimaha software ee blog-kan?Next »